Umbono omangalisayo "WOLWANDLE". Yiya elunxwemeni *6 - I-Airbnb
Umbono omangalisayo "WOLWANDLE". Yiya elunxwemeni *6
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguIzzy
I-Ocean 6 yiflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi okulala ale mihla nevulekileyo ekumgangatho wokuqala weflethi okanye indlu ekwicomplex yabucala, esecaleni kweenduli kumantla athuleyo eSanta Teresa ejongene noLwandle oluhlaza oluhlaza lwePasifiki, uphephe ingxolo nothuli lendlela ephambili. Yimizuzu eyi-3 kuphela yokuhamba umgama ukusuka elunxwemeni kwenye yezona ndawo zihamba phambili zokusefa eCosta Rica – "La Lora ''. Iivenkile zokutyela, iivenkile kunye neevenkile ezinkulu zikufuphi.
Le flethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi okulala aliqela ikumgangatho ongasentla wesakhiwo ngasinye esineendawo ezintle ezibonisa ulwandle nokutshona kwelanga. Ipuli yokubuka ulwandle ebonakala ingenasiphelo isetyenziswa nangabanye abantu. Yindlela yale mihla eyakhiwe ngayo itropiki kunye nezixhobo zayo ezifana ne-A/C, iifeni zesilingi, i-Wi-Fi ye-100MB, kunye ne-Smart TV enkulu, zenza kube mnandi kakhulu. Indawo yokuhlala etofotofo kunye nekhitshi ziibhalkoni ezinkulu ezinefenitshala kunye neminyango yeglasi esilayidayo ukuze kungene umoya wolwandle omtsha. Ikhitshi layo elinento yonke oyifunayo linayo yonke into oyifunayo: umatshini wokwenza ikofu ogqibeleleyo wekofu yaseCosta Rica, iblender yeziqhamo ezisandul 'ukuvunwa kunye neziselo zokutshona kwelanga, isitovu segesi, i-toaster oven, ifriji enkulu, izitya kunye nezinto zokupheka, kunye nendawo yokufaka amanzi asebhotileni esoloko egcweleyo. Igumbi lokuhlambela lale mihla elinezinto zodidi oluphezulu ezineemvula. Amagumbi okulala aneebhedi ezinkulu ezinomatrasi oomatrasi namashiti amatsha. Indawo yokuhlala inesofa etsalwayo. Umntu ococa indlu yethu uyacoca yonke imihla. Kukho indawo yokupaka yabucala eneemoto eziyi-5 okanye ii-ATV eziyi-6. Isitepsi sikhokelela kwiiflethi okanye izindlu ezikwicomplex ukuya kwinduli enyukayo ukuya kwindlela ephambili kunye nolwandle.
4.83 · Izimvo eziyi-191
Sihamba nje imizuzu eyi-3 ukuya kumalwandle amahle kunye nenye yezona ndawo zintle zokusefa eCosta Rica – "La Lora" - kumantla athuleyo eSanta Teresa.
Umbuki zindwendwe ngu- Izzy
Izimvo eziyi-1 059
Siyavuya kakhulu ukukunceda ngayo nantoni na oyifunayo nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhlala kwakho. Singacebisa iindawo zokutyela, abahlohli be-surf, izifundo zeYoga kunye neePilates, uhambo lokuloba, ukhenketho lwe-canopy zip, ukukhwela ihashe, ukunyuka kwendalo, iirenti ze-ATV, nokunye.
Siyavuya kakhulu ukukunceda ngayo nantoni na oyifunayo nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhlala kwakho. Singacebisa iindawo zokutyela, abahlohli be-surf, izifundo zeYoga kunye neePi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Santa Teresa, Malpais